Showing 81-100 of 472 items.
नाम्जेको भ्रमणमा स्टेट वान आईडलका प्रतियोगिहरु, थुम्की होमस्टेमा सामुहिक हुर्रा नाँच र दोहोरी
पुर्वको रमणीय र पर्यटकीय गन्तव्य स्थल साँगुरीगढी गाउँपालिका धनकुटामा अवस्थित नाम्जे र थुम्किको भ्रमण र अवलोकन गरेका छन् । शुक्रबार धरानबाट सुरु भएको दुईदिने भ्रमण भेडेटार थुम्कि,नाम्जे लगायतका रमणीय स्थलहरु&nbsp; प्रदेश नं एक �
भोइस अफ नेपालका रामलाई भेट्दा एक युबति डाको छाडेर रुइन ! भोइस अफ नेपालका राम लिम्बुलाइ भेट्न पाउँदा एकजना युबतीले डाको छाडेर रोएकी छिन । निकै राम्रो गित गाउने रामलाई युबतीहरुले घेराउ नै गरेका छन । सानैदेखी गित गाउन रुचाउने राम ल
काठमान्डौ , पुर्व पुवराज्ञी हिमानी शाहले धेरै उतारचढावहरुको सामना गर्नुपरिरहेको छ । भारतको राजस्थानको सिकरका पूर्व सूर्यबंशी राजकूलका राजा बिक्रम सिंह र रानी बिपुला सिंहकी छोरी हिमानी अहिले समाजिक सेवामा सक्रिय छिन् ।जनतास
टिक टक। अचेल बालबालिका, किशोर, युवाले असाध्यै रुचाउने एप हो। टिक टकका मालिक चिनियाँ नागरिक झाङ यिमिङ &lsquo;आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स&rsquo; प्रयोगले &lsquo;टेक्नोलोजी&rsquo; मा विश्वभर चर्चाको शिखरमा छन् यतिबेला। नाम मात्रै होइन, ३६ वर्षीय झ�
'पारस र सोनिकाको गोप्य च्याट सार्वजनिक'
काठमाडौं&ndash; पूर्वयुवराज पारस शाह र मोडल तथा सोनिका रोकाया केही समययता नजिक छन् । यी दुई प्रेममा रहेको चर्चा चल्ने गर्छ । यद्यपि दुवैले प्रेममा नरहेको दाबी गर्दै आएका छन् । यता पारस र सोनिकाको हिमचिम भने दिनप्रतिदिन बढ्दैछ । सोन
काठमाडौं र एउटा कलाकारका लागि &lsquo;अवार्ड&rsquo; को महत्व निकै ठूलो हुन्छ । विभिन्न संघसंस्था र राज्यले प्रदान गर्ने &lsquo;अवार्ड&rsquo; हरुले कलाकारलाई थप नयाँ काम गर्न हौसला र प्रेरणा प्रदान समेत गर्छ । कतिपय कलाकारहरुले त अवार्डका लागि &lsq
'भ्वाइस अफ नेपालको टप ८ मा पुर्वकी चेली मेचु धिमाल'
मोरङको उर्लाबारीकी चेली मेचु धिमाल द भ्वाइस अफ नेपालको टप ८ मा परेकी छिन् । शुक्रबार प्रसारित भ्वाइस अफ नेपालमा उत्कृष्ट गीत प्रस्तुत गरेकी मेचु टप ८ मा पर्दा बल बहादुर राजवंशीले स्टेज छोड्नु परेको थियो । धिमालले सबै सहयोगीरु�
ईशा अम्बानी : 'कम उमेरमै धनीको सूचीमा परेकी एक्लैले जोडिन् यति सम्पत्ति'
रिलायन्स र जियोको बोर्ड मिटिङमा आफ्नो दमदार प्रस्तुती दिएकी भारतकी सबैभन्दा व्यापारी मुकेश अम्बानीकी छोरी ईशा अम्बानी छिट्टै बलिउडमा देखिने भएकी छिन् । उनी फिल्म प्रोड्युसरको रुपमा बलिउडमा प्रवेश गर्न लागेकी हुन् । ईशा अम्�
'फागुनमा गर्ने भइन आचल शर्माले बिहे'
धेरै नेपालि फिल्ममा अभिनय गरिसकेकी नेपालि चर्चित मोडल तथा नायिका आँचल शर्माको विवाहको कुरा लिएर सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा रहेकी छिन् ।अभिनेत्री आँचलले केही समय पहिले आफू डा। उदिप श्रेष्ठ सँग गहिरो प्रेममा रहेको खुलाएकी थिइन�
काठमाडौ। नेपालका पुर्व राजपरिवार नाइट क्लबमा देखिरहन्छन् । पुर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह सपरिवार क्लबमा पुगेर रमाइलो गर्छन् । सार्वजनिक ठाउँहरुमा खासै नदेखिने पुर्वराजालाई क्लबमा देखेर राजाको नारा लगाउने जमात ठूलै छ । कहिले त
काठमाडौं। एक समय थियो जतिबेला अभिनेत्री निरुता सिंहलाई फिल्ममा लिन निर्माताहरूको लाइन लाग्थ्यो। निरुताको नाममै वितरकहरू फिल्म किन्थे। सन् १९९४ देखि करिब १ दशक निरुताले नेपाली फिल्म क्षेत्रमा आफूलाई &lsquo;लिडिङ लेडीका रुपमा उभ
बुढासुब्बा प्रमोशन कप - धरान उपमहानगरपालिका फाइनलमा
धरान । बुढासुब्बा गोल्डकपको प्रमोशनकालागि आयोजना गरिएको बुढासुब्बा प्रमोशन कपमा बराह ज्वेलरीलाई पराजित गर्दै धरान उपमहानगरपालिकाका फाइनलमा प्रवेश गरेको छ ।बुधबार भएको खेलमा धरान उपमहानगरपालिकाले टाइब्रेकरमा ३(१ गोल अन्त�
सुम्निमाको सँस्कृतिमय देउसी भैलो
नेपाली मौलिक परमपरा र सस्कृतिमा पस्चिमा परम्परा र सस्कृतिको हावी हुँदै जादा सुम्निमा उपसमिती सुनसरी यसलाई जिवन्त राख्नको लागि अग्रसर बन्दै गएको छ । शनिवार ईटहरी गैरिगाउ वडा न ४ मा आयोजित सुम्निमा उपसमितिको देउशी भैलो समापन क�
सुम्निमाकाे सँस्कृतिमय देउसी भैलो
मोतीराज सुनुवारको चुनाबी म्युजिक भिडियो सार्वजनिक (भिडियो सहित)
धरान । नेपाल कम्युनिष्ट पाटी(एमाले) सुनसरीका पुर्व सविच सचिव एवम् औजार दैनिक धरानका अध्यक्ष मोतीराज सुनुवारले नेपाल कम्युनिष्ट पाटी(नेकपा) को उप निर्वाचन चुनाबी म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरेका छन् । शनिबार नेकपा धरानको पार्ट�
६ करोडका मालिक सन्दिप लामिछ्ने : 'यस्तो छ लामिछानेको घर,घरमा पुगे आमाबुवा'
नेपालका युवा क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने अन्तर्राष्ट्रिय फ्रेञ्चाइजी प्रतियोगिताका अनिवार्य सदस्य बनिसकेका छन् । ४ कात्तिकमा मात्रै सन्दीप द हन्ड्रेडमा झण्डै डेढ करोडमा अनुबन्धित भएका छन् । भर्खरै सार्वजनिक एक नतिजा अनुसार, �
'सेफ अलि खानले गरे पहिलो श्रीमतीको यसरी तारिफ'
सेफ अलि खानले एक अन्तरवार्तामा आफ्नो पहिलो श्रीमती अमृता सिंहको खुलेर प्रशंसा गरेका छन्। उनले कामलाई गम्भीर रुपमा लिन अमृताले आफूलाई सिकाएको बताए। उनले भने, &lsquo;म २० वर्षको मात्र थिए जब मैले विवाह गरे। म अमृतालाई धन्यवाद दिन चा�
'बलिउड अभिनेता गोविन्दा नेपालमा, यस्तो छ कार्यक्रम' ?
काठमाडौं । नेपाली ज्वाईको उपाधि पाएका बलिउड अभिनेता गोविन्दा अहुजा नेपाल आएका छन् । उनी श्रीमती सुनीतासहित मंगलबार काठमाडौं आइपुगेका हुन् । उनको साथमा केही समयदेखि बलिउड बस्दै आएकी नेपाली अभिनेत्री निरुता सिंह पनि नेपाल आएक�